कान्छी औंला हेरेरै थाहा पाउन सकिन्छ मान्छेको भाग्य र भविष्य ! – Complete Nepali News Portal
सत्यलोकेषु ये सर्पाः वासुकिना च रक्षिता। नमोस्तुतेभ्यः सर्पेभ्यः सुप्रीतो मम सर्वदा।।५।।
तपाईंलाई आश्चर्य लाग्ला तर औंलाको लम्बाइ र आकारले व्यक्तिको स्वभाव कस्तो हुन्छ भन्ने बताइदिन्छ । प्रत्येकऔंलामातीनभाग हुन्छन । यीभागकाआधारमा व्यक्तित्वको जाँचपरख गर्न सकिन्छ । कुनै भागलामो भयो भने अरू दुई भाग छोटा हुन्छन् ।
तपाईंको कान्छी औंलामा टुप्पोको भाग अधिक लामो छ भने तपाईंको भाग्य र भविष्य कस्तो हुन्छ । के औंलामा टुप्पोको भागले मानिसको भाग्य र भविष्य बताउछ त ? ज्योतिष विज्ञानमा यस्ता धेरै कुरा छन् यसको जवाफ ज्योतिष केशव गौतमबाट लिनुहोस् ।
जानकारीका लागि पुरा भिडियो हेर्नुहोस्